DEG-DEG: Taariikhda Iyo Wakhtiga Uu Qabsoomayo Final-ka FA Cup Ee Arsenal vs Chelsea Oo Lagu Dhawaaqay (Meel Ku Qoro) - Gool24.Net
DEG-DEG: Taariikhda Iyo Wakhtiga Uu Qabsoomayo Final-ka FA Cup Ee Arsenal vs Chelsea Oo Lagu Dhawaaqay (Meel Ku Qoro)
July 22, 2020 Apdihakem Omer Adam
Xidhiidhka kubadda cagta England ee FA-ga ayaa shaaca ka qaaday maalinta iyo saacada la ciyaari doono kulanka Final-ka FA Cup ee dhex maraya kooxaha London isku colaadiya ee Arsenal iyo Chelsea.
Labada kooxood ee ree London ayaa kasoo takhalusay dhigooda Manchester, Arsenal ayaa 2-0 kusoo jiidhay Manchester City Sabtidii halka Chelsea ay Axadii 3-1 kaga soo talaabsatay Man United.
Kulanka ay Gunners soo adkaadeen ayaa ahaa mid uu Mikel Arteta ka badiyay macalinkiisii Pep Guardiola iyo waliba Man City oo toddobadii kulan ee ugu dambeeyay dhammaan kasoo wada adkaatay Arsenal.
Dhinaca kale Chelsea oo uu hoggaaminayo macalin Frank Lampard ayaa iska maydhay ceeb xilli ciyaareedkan ka haysatay Man United iyo Ole Gunnar Solskjaer oo gudaha doorkan oo kaliya saddex jeer kasoo adkaaday.
Haddaba, sida haatan FA-gu shaaciyay, kulanka Derby London ee Final-ka FA Cup ayaa dhici doona Sabtida 1-da bisha dambe ee August iyadoo Wembley ay ciyaartu ka bilaabmi doonto 7:30 habeenimo xilliga geeska Africa.
Chelsea ayaa hadda dareenkeedu yahay labada kulan ee ugu dambeeya Premier League si ay u xaqiiqsadaan inay usoo baxeen Champions League.
Blues ayaa hadda booska saddexaad ee miiska kala sarreynta Premier League ku jira waxaana ay hal dhibic ka horreeyaan Man United iyo Leicester City.
Arsenal ayaa guul ay kulanka FA Cup-ka gaadho ku gali doonta Europe League oo ay hadda xaqiiq tahay inay xilli ciyaareedka dambe ka hadhay halka haddii ay Chelsea badiso ay wax badan ka qasi doonto dhigooda.